यात्रा : लेनिन, इवेला र भोड्का- फिचर - कान्तिपुर समाचार
यात्रा : लेनिन, इवेला र भोड्का
म पूर्व सोभियत भूमि जाँदै थिएँ । जहाँ शताब्दीअगाडि लेनिनको आह्वानमा डेढ दर्जन देश सोभियत संघमा आबद्ध भए । लाग्छ, त्यो कुनै उपन्यासको रोचक घटना हो । जसलाई स्कुलमा हाम्रा गुरुहरूले बान्की मिलाएर सुनाएका हुन् ।
मंसिर १६, २०७४ केशव दाहाल
काठमाडौं — पूर्वी नेपालमा चिनिएका भाषाविद् छन् प्रा.टंक नेउपाने । उनी भन्छन् ‘मान्छेको जातै यायावर ।’ बूढाले ठीकै भनेजस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ । घुम्न मन नगर्ने मान्छे कमै भेटिन्छन् । मलाई पनि घुम्न असाध्यै मन पर्छ । त्यही रहरले कहिले कता पुर्‍याउँछ कहिले कता । यसपालि मौका मिल्यो किर्गिस्थान जाने ।
कस्तो होला किर्गिस्थान ? मनमा अनेकौं ‘स्केचहरू’ बन्न थाले । सिमसिम पानी परिरहेको बेला घुम ओडेर खर्कमा भेडा चराउँदै गरेको च्याङ्बाको सपनाजस्तो ‘निश्छल’ छ कि । महिनौं लामो युद्धबाट फर्किएको लडाकु घोडाको जगरजस्तो ‘जब्बर’ पो छ कि । फुसफुस पर्दै गरेको तुसारो छलेर धुपीको फेदमा प्रेमालाप कुनै युवाजोडीको उद्वेलित मनजस्तो ‘चञ्चल’ पो छ कि । युरोपको चिसोमा कफीको चुस्की लिँदै किताब पढ्ने महत्त्वाकांक्षी पाठकको कल्पनाजस्तो ‘बेलगाम’ पो छ कि । हरेक दिन मधुशालामा प्रेम गीत गाउँदै नाच्ने कामुक नर्तकीको कम्मरजस्तो ‘लचिलो’ पो छ कि । अथवा ज्वालामुखी भर्खर निभेको भल्ग्यानोजस्तो ‘क्लान्त’ पो छ कि । मन न हो अनेकौं चित्र बने र मेटिए । अन्तत: सेप्टेम्बर ९ तारिख पनि आइपुग्यो । जुन दिन राति हामी पाँच जना नेपाली काठमाडौंबाट किर्गिस्थानका लागि उड्यौं ।
म पूर्व सोभियत भूमि जाँदै थिए । जहाँ शताब्दीअगाडि लेनिनको आह्वानमा डेढ दर्जन देश सोभियत संघमा आबद्ध भए । लाग्छ, त्यो कुनै उपन्यासको रोचक घटना हो । जसलाई स्कुलमा हाम्रा गुरुहरूले बान्की मिलाएर सुनाएका हुन् । सोभियत संघका अनेकौं कथा, कविता र गीत सुनेर हामी हुर्कियौं । सम्झिल्याउँदा मनको क्यानभासमा सोभियत क्रान्तिको मेरो आदर्श पावेल कर्चागिन आयो । मलाई लाग्यो वर्षौंअगाडि ऊ रूसका चिसा पहाडहरू छिचोल्दै किर्गिस्थान आयो होला । मस्कोमा सुक्खा दाउरा पुर्‍याउन उसले लामा–लामा रेलका पटरीहरू बिछ्यायो होला । उटपट्याङ मनोकामना जागृत भयो कि किर्गिस्थानको कुनै भट्टीमा भोड्का पिउँदै गरेको पावेललाई भेट्न पाए कस्तो हुन्थ्यो ? यस्तै कल्पनाहरूसँग रमाउँदै काठमाडौं छोडेको झन्डै ३० घण्टापछि हामी ‘मानस’ विमानस्थल आइपुग्यौं । त्यो ११ सेप्टेम्बरको दिन थियो र समय बिहान ४:३० बजे ।
विमानस्थलमा रिमरिम उज्यालो झर्दै थियो । मान्छेहरू निद्राबाट ब्युँझिएर आङ तन्काउँदै थिए । यात्रु आगमन कक्षमा भकुन्डोजस्तो टोपी लगाएका प्रहरीहरूको ओहोरदोहोर देखिन्थ्यो । हामीसँग त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले लेखिदिएको ‘भिसा लेटर’ थियो । यद्यपि भिसा लिनुपर्ने औपचारिकता बाँकी थियो । त्यसैले हामी भिसा कक्षबाहिर लाइन लाग्यौं । झ्यालको अर्कोपट्टि थिई एक्ली युवती । काम धेरै थियो । डकुमेन्टहरू ध्यानपूर्वक हेर्नु, फोटोकपी गर्नु, फोटो र मान्छेको अनुहार भिडाउनु र पासपोर्टमा भिसा टाँस्नु । सबै काम पूरा गर्न कम्तीमा १० मिनेट लाग्थ्यो । ऊ ध्यानपूर्वक सबै काम गर्थी । कविता लेखेजस्तो । बिहान ७ बजेतिर हाम्रो काम सकियो । हामी राजधानी बिस्केकतिर लाग्यौं ।
राजधानी बिस्केकको ‘दमास’ इन्टरनेसनल होटल छरितो, सफा र सुन्दर थियो । यस्तो कि सहरको बीचमा उभिएको ११ तले होटल नै त्यहाँको सबैभन्दा अग्लो भवन हो । मध्यदिनमा पनि सहर शान्त थियो । फराकिला सडक, प्रशस्त खुला ठाउँ, पातला गाडी र सरल जीवनशैली । सहरको ‘ढप’ पत्याउनै नसकिने साधारण थियो । अचम्म के भने अधिकतम आवासीय घरहरू साना–साना । साना भनेको अचम्मै साना । जस्तापाताले छाएका एक वा दुईतले । मानौं कि हामी मिलाएर बनाइएको कुनै सुकुम्बासी बस्तीमा छौं । तर आँगन र झ्यालढोका भने सफा र उज्याला । यस्तो कि किर्गिस कथाकारले आफ्नो कथाका लागि रचना गरेको गाउँ हो त्यो । कस्तो उदेकलाग्दो कुरा, घर बनाउन पटक्कै सोख नभएका मान्छेहरू ।
बिस्केकको पहिलो दिन । घुम्नुबाहेक अरू काम थिएन । त्यसैले हामी पाँचै जना होटलबाट निस्कियौं । होटलको दाहिने मोहोडाबाट केही अगाडि मात्र बढेका थियौं ‘भिक्टोरी मोनुमेन्ट’ आइपुग्यो । नाजी जर्मनविरुद्ध युद्ध लड्न गएका आफ्ना पति र छोराहरूलाई पर्खिबसेकी आमामा समर्पित त्यो स्मारक किर्गिस स्वतन्त्रताको प्रतीक मानिन्छ । कलेजी रंगको सिंगमरमरको भुइँ, कलेजी रंगकै सिँढी र फलैंचा । फराकिलो पटांगिनी । मध्यभागमा निरन्तर बलिरहेको विशाल दीप । ठूला–ठूला स्तम्भहरू अर्धचन्द्राकारमा उठेर दुई बाँस उचाइमा मिलेका । यस्तो कि चारवटा हात मिलाएर कसैले छानो बनाएको होस् । ठीक आमाले आशीर्वाद दिएजस्तो । स्मारकवरिपरि भीडभाड पटक्कै थिएन । जो सबै शान्त थिए । मानौं कि उनीहरू हराएका आफ्ना प्रियजनको स्वर सुन्न उत्सुक छन् । अथवा कुनै देवदूतको आकाशवाणी हुँदै छ ।
स्मारकबाट केही अगाडि गहना, लत्ताकपडा र खाद्यान्नका पसलहरू भेटिए । एक दुई जनासँग कुरा गर्न खोज्यौं तर भाषाको समस्या । यस्तो कि मनमा अनगिन्ती प्रश्नहरू छन् तर बोल्न शब्दहरू छैनन् । उनीहरू अंग्रेजी नबोल्ने, हामी रसियन वा किर्गिस नबुझ्ने । खुला ठाउँमा बसेर कफीको मजा लिने सल्लाह गर्‍यौं । त्यही बेला तीरजस्ता आँखाले हामीलाई हेर्दै एउटी चञ्चले मैया आइपुगी । उसको अनुहार हाम्री लोकगायिका कोमल वलीको जस्तो । नाक अलिक थेप्चो, आँखा अलिक गोला तर ओठ र हँसाइ उस्तै । ऊ हाम्रो नयाँ चालढाल देखेर कुरा गर्न उत्सुक थिई । तर नेपालको नामै नसुनेकी । हैट कस्तो अचम्म । सुरुमा ऊ कुरा गर्न निकै जोस देखाउँदै थिई तर पाँच मिनेट नहँुदै गलिहाली । उसलाई कनीकुथी अंग्रेजी बोल्न अल्छी लाग्यो कि ? झ्याउ मान्दै ऊ बाटो लागि ।
बिस्केकमा एक दिनको कार्यक्रम सकेर हामी इसाकुलतिर लाग्यौं । बिस्केकबाट २५० किमि टाढा, तीन घण्टाको सडकयात्रामा पुगिन्छ इसाकुल । इसाकुल ट्रपिकल ल्यान्डमा बनेको संसारकै दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ‘लेक’ । समुद्रजस्तो । लेकसँग जोडिएर बसेको छ सानो पर्यटकीय सहर । होटलको म्यानेजर भन्दै थियो ‘यो लेक चन्द्रमाबाट पनि देखिन्छ ।’ आकाशजस्तो कञ्चन, पवित्र र विशाल । जसको चौडाइ ६० किलोमिटर र लम्बाइ १८२ किलोमिटर छ । हामी राति १० बजे मात्र पुग्यौं त्यसैले बत्तीको चमकबाहेक केही देखिएन । तर बिहान जब झ्यालको पर्दा हट्यो तब पो देखियो शान्त लेक, पानीमा टल्किएको ताजा सूर्यको किरण र पानीहाँसको मेला । कस्तो भब्य रंग । नीरमा अबिर घोलेजस्तो ।
नजिकबाट हेर्दा लेकको सुन्दरता अझ विश्मयकारी देखिन्थ्यो । पश्चिम दक्षिणमा आकाश छुन उठेका खैरा र मुडुला पहाड । मंसिरमा खमारमा धान थुपारेजस्ता । हिउँबिनाका शिखर । बेला–बेला मोटरबोटले शान्ति बिथोल्छ । अन्यथा चकमन्न सबै कुरा । मनमोहक सबै कुरा । तालको छेउमा उभिएर छालहरू गनिरहँदा लाग्छ हामी प्रशान्त महासागरको कुनै कुनामा छौं । यसरी म लेकको सम्मोहनमा फसें । पानीमा खुट्टा चोपलेर घण्टांै बसिरहन मन लाग्ने । छालहरूसँगै बग्न, नाच्न र गाउन मन लाग्ने । मन्त्रमुग्ध सबै कुरा । मान्छेको कमलो मनलाई हल्लाउन अरू के चाहियो र ? त्यहाँ सबै शान्त । सबै प्रेमील । मन त्यसै त्यसै बहकिने । इसाकुलको अन्तिम साँझ मलाई लाग्यो जलपरि बनौं र अमर प्रेमका लागि कसैलाई त्यहीँ किनारमा जन्मजन्म पर्खिरहूँ ।
तेस्रो दिन डिनरपछि व्यवस्थापकले सुस्तरी सुनायो, ‘भोलि तिम्रा लागि सप्र्राइज ट्रिप हुन्छ ,’ नभन्दै हाम्रो ‘ट्रिप’ रहेछ माथि–माथि सैलुंगेतिर । मन चञ्चल भयो । कस्तो होला त्यो पहाड ? कस्तो होला त्यो माटो ? चौथो दिन बिहानै बस गुड्यो । इसाकुलबाट डेढ घण्टा हिँडेपछि गन्तव्य आइपुग्यो । वरिपरि अर्कै संसार थियो । जहाँ रूखहरू थिएनन् । जहाँ फूलहरू थिएनन् । जहाँ हिउँ थिएन । जहाँ डाँफे, मुनाल र लालीगुराँस थिएन । जहाँ हामीले सुन्दर भनेका विम्बहरू थिएनन् । त्यहाँ सयौं घोडाका लस्करहरू थिए । त्यहाँ पठारमा रमाइरहेका साना–साना बछेटाहरू थिए । फुप्प पुच्छर भएका गाईहरू थिए । त्यहाँ बथानका बथान भेडाहरू चरिरहेका थिए । यस्तो कि त्यो भेडाहरूको देश हो र हामीलाई भेडाको राजाले निमन्त्रणा दिएको होस् ।
गाडीबाट उत्रिनासाथ एक जनाले चर्को स्वरमा भन्यो, ‘तपाईंहरूलाई पास्चरल्यान्डमा स्वागत छ । मनलाग्दो घोडा चढ । अघाउँजी भेडाको मासु खाऊ । घोडीको पातलो दूध पिऊ । लेकाली पानीमा नुहाऊ । यो सब तिम्रै लागि हो । तर विशेषत: आज रेन्जर डे हो । रेन्जरहरू भोड्काका सोखिन हुन्छन् । त्यसैले आज तिमीले पनि सबैभन्दा धेरै भोड्का पिएर हामीलाई खुसी पार्नुपर्छ । चेयर्स ।’ कसैले भोड्काको बोतल खोलि पो हाल्यो । यसरी सुरु भयो रसरंग । पाँच जना सानासाना फुच्चे केटाहरूले एक हूल घोडाहरू ल्याए । मैले एउटा बलियो, अग्लो र चिल्लो घोडा छानें र लागे उकालोतिर ।
मेरो घोडा चाल मिलाएर हिँड्थ्यो । लमकलमक । ऊ मेरो ख्याल राखेर हिँड्दै थियो । जस्तो कि म उसको पुरानो मालिक हुँ । माथि डिलमा पुगेर चारैतिर आँखा डुलाउँदा मलाई आफैंमाथि गर्वबोध भयो । लाग्यो, ‘म यो खर्कको राजा हुँ । मसँग सबैथोक छ । मसँग यो सुन्दर संसार छ जहाँ म मनखुसी आफ्ना सपनाहरूको गीत गाउन सक्छु ।’ कस्तो घमण्डको अनुभूति । केही तल हाम्रो टोली हल्ला गर्दै थियो । सबैका हातहातमा भोड्का थियो । सानो थुम्को, थोरै गल्छी र दम्स्याइलो पाखो छिचोलेर उनीहरू नजिक पुग्दा एक युगल जोडी गाउँदै थियो । साथीहरू नाच्दै थिए । भोड्काले आफ्नो पाइन देखाउन थालेको थियो । हामीले ‘रेसम फिरिरि’ गीत गायौं । एउटी मैयाले हाम्रो लयमा लय मिलाई । एकै छिनमा रेसम फिरिरि त समूहगान पो बन्यो । मसँग थिए डा. भरत क्षेष्ठ । उनी भन्दै थिए, ‘यो पो हो त रमाइलो ।’
खर्कबाट होटल आइपुग्दा साँझ पर्दै थियो । एउटी मैया मलाई नै पर्खी बसेकी । उसको नाम थियो इवेला । खासमा म केही मान्छेहरू भेट्न चाहन्थे । म चाहन्थें कुनै प्रौढलाई भेट्न जसले हिजो लेनिनका सपनाहरूसँग आफूलाई एकाकार गरेको होस् । म केही युवाहरू भेट्न चाहन्थें जोसँग भन्नलाई आजका सपनाहरू हुन् । म यस्ता मान्छेहरूसँग आँखामा आँखा जुधाउन चाहन्थें जसले सोभियत मृगतृष्णाको कुरा गरोस् । जसले आजको उदार समाज व्यवस्था र किर्गिस लोकतन्त्रबारे बताओस् । तर त्यो सबैको बदलामा आइपुगी इवेला । ऊ स्थानीय केटी । मसँग कुरा गर्न होटलको म्यानेजरले बोलाइदिएको । परिचयपछि मैले भनें, ‘म किर्गिस्थानको विगत र वर्तमानलाई सुन्न चाहन्छु । म यस्तो सत्यको अनुभव गर्न चाहन्छु जसले संसारका सुख र दु:खका दिनहरूको हिसाबकिताब गर्न सिकाओस् ।’ उसले भनी, ‘मसँग साधारण कुरा गर । धेरै गम्भीर कुरा गर्न मलाई आउँदैन ।’
इवेला अंग्रेजी सिक्नकै लागि केही समय जर्मनी बसेर फर्किएकी । बिस्केकको टर्किस युनिभर्सिटीमा टुरिजममाथि मास्टर्स गर्दै गरेकी । ऊ आकर्षक थिई । मेरा व्यक्तिगत जिज्ञासाहरू सुनेर लजाउँदै उसले भनी, ‘तिमी मसँग राजनीतिको कुरा गर्न चाहन्थ्यौ ।’ तर ऊ पनि व्यक्तिगत कुरा गर्न सिपालु । ऊ मेरा जिज्ञासाहरूको शान्त स्वरमा जवाफ दिन्थी । आधा घण्टा गफिएपछि मैले भनें, ‘हिँड कफी खान ,’ कफी पिउँदै उसले आफ्ना बाजेले सुनाएका क्रान्तिका कथाहरू भनी । उसले भनी, ‘बाजेहरू हिजो खुसी थिए, हामीलाई आज मजा छ । हिजो सबै कुरा सामूहिक थियो । त्यसैले कसैलाई हतार थिएन । तर आज समय यति तीव्र छ कि आरामले भोड्का पिउन पनि पाइँदैन ।’ इवेलाको एउटा दाँतमा सुनको जलप थियो । ऊ हाँस्दा सूर्य झुल्किएजस्तो लाग्थ्यो । म मन्त्रमुग्ध बनें ।
उसले सुनाई अक्टोबर १५ मा त्यहाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । उम्मेदवार छन् ४५ जना । तर उसले भोट हाल्ने छनोटमा थिए दुई जना । किन दुई जना ? उसले भनी, ‘उनीहरू युवा छन् । सुन्दर छन् । सम्पन्न छन् । त्यसैले ।’ मैले सोधें, ‘राजनीतिक विचार नि ।’ विचार ? अचम्म मान्दै उसले भनी, ‘उनीहरूले विकासको कुरा गरेका छन् ।’ दर्शन ? उसले भनी, ‘सायद उनीहरूका लागि विकास नै दर्शन हो ।’ त्यसो भए के किर्गिस्थानमा माक्र्सवादी, लेनिनवादीहरू छैनन् ? उसले कूटनीतिक जवाफ दिई, ‘त्यो म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । तर मैले त्यस्ता मान्छे देखेको छैन ।’ कस्तो अनौठो कुरा । लेनिनकै पूर्वसोभियत भूमिमा लेनिन कतै छैनन् । किर्गिस्थानमा मनग्गे भोड्का छ, भेडा छन् तर लेनिन छैनन् । गोठ छ तर गोठमा वर्गसंघर्ष हैन प्रेमका कथाहरू पढिन्छ । के किर्गिस्थान फेरिएकै हो त ? उसले अत्यन्तै सरल उत्तर दिई, ‘हो नि फेरिनै त पर्छ ।’
किर्गिस्थान फेरिँदै छ । जस्तो हाम्रो कार्यक्रम आयोजक थियो किर्गिज संस्था ‘काफ्लु’ । काफ्लुका प्रमुख थिए पूर्व वन विभागका निर्देशक र वनमन्त्री । ७३ वर्षका उनी फरासिला थिए । उनले गत वर्ष कक्षा ८ मा १ वर्ष पढेछन् । किन ? उनी भन्छन्— अंग्रेजी सिक्न । विदेशीसँग कुरा गर्न । विश्वसँग सम्बन्ध बनाउन । यस्तो बदलाव छ त्यहाँ । इवेलाले सुनाई, ‘हिजो युवाहरू असल कमरेड बन्ने सपना देख्थे । सन् १९९० पछि सपना फेरियो र युवाहरू असीमित स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न थाले । तर आज उनीहरू व्यावहारिक बन्दै छन् । आजका युवाहरू सानो घर, सुन्दर जीवनसाथी, स्वस्थ बालबच्चा र शान्त जीवनको सपना देख्छन् । मान्छेहरू हिजो समाजको विषयमा सोच्थे । जब ९० पछि समाजको बोझ हट्यो मान्छे आकाशमा उड्न थाल्यो । आकाशमा उड्नेहरूको सपना के हुन्छ भन्नु पर्दैन ।’
अन्तिम दिन हाम्रो दोभाषे बिन्दास थिई । हामीले ‘वालनट’ र ‘आल्मोन्ड’ किन्न खोज्यौं । जिस्क्याउँदै उसले भनी, ‘ओखरजस्तै छन् किर्गिस मैयाहरू । बाहिर कठोर तर भित्र विछट्टका रसिला । तिमी लान्छौ भने भनिदिन्छु ।’ उसले थोरै भोट्का पिएकी थिई । त्यसैले अनुहारमा तीव्र मादकता थियो । त्यही मादकता भरिएका आँखा झिम्क्याउँदै उसले विमानस्थलमा हामीसँग बिदाइका हातहरू हल्लाई ।
अन्तिममा एउटा सत्य बताउँछु । त्यो के भने हाम्री दोभाषेभन्दा इवेला धेरै राम्री । ढ्याक्कै अग्निदीक्षाकी तोन्याजस्ती । मैले नेपाल फर्किएर इवेलालाई इमेल लेखें । लेखे ‘इवेला आज राति सपनामा मैले तिमीलाई देखें । तिमी परीको भेषमा आकाशतिर उड्दै थियौ र म तिमीलाई छुन शिखरतिर चढ्दै थिएँ ।’ खासमा मैले कुनै सपना देखेको होइन । यो त इवेलालाई ‘इम्प्रेस’ गर्ने मेरो तरिका मात्र हो । मलाई लाग्छ एउटी सुन्दर युवतीका लागि थोरबहुत ढाँट्नु कुनै पाप होइन । हेरौं जवाफमा इवेलाले के भन्छे ? म उसको इमेल पर्खिरहेको छु । आशा छ कि उसको इमेलले मेरो किर्गिस्थान यात्रालाई अम्मर बनाउनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ १७:३५
ललितपुरलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउँछौं : दाहाल
मंसिर १६, २०७४ प्रशान्त माली
ललितपुर — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललितपुरलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने बताएका छन् ।
सुनाकोठीमा शनिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार पम्फा भूसालले प्रस्ताव गरेको ललितपुरलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने एजेन्डा केन्द्रको तर्फबाट समर्थन भएको उनले बताए । ‘यसलाई पार्टी एकता कमिटी संयोजकको तर्फबाट पनि पूर्णरुपमा समर्थन गर्न चाहन्छु,’उनले भने ।
सभामा उनले वाम गठबन्धनलाई जिताएमा मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिरलाई लैजाने दाबी गरे । ‘संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने सामाजिक न्यायलाई संस्थागत र भष्टाचारलाई अन्त्य गछौं,’ उनले भने, ‘दस वर्षभित्र ५ हजार डलर आय, वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउँछौं ।’
उनले विकासनिर्माणका पूर्वाधार, पर्यटन, जडिबुटीको बारेमा पञ्चवर्षीय योजना बनाउने र विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काइने बताए । ‘जनताले चुनेमा पाँच वर्ष विकासका लागि धेरै मिहिनेत गर्छौ,’उनले भने, ‘जसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई ५० वर्षसम्म चुन्न जनता तयार हुन्छन् ।’ उनले निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच एकता हुने पनि निश्चित भएको दाबी गरे । ‘कयौं निर्वाचनमा तालमेल भएको छ,’ उनले भने, ‘तर पार्टी एकताको संकल्पसहित एकता संयोजन कमिटी गठन भएर तालमेल भएको छैन, जुन हामीले गरेका छौं ।’
प्राविधिक कारणले चुनावअघि एकता हुन नसकेको बताउँदै २०१९ सालदेखि विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्न अब कसैले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ १७:१७
कसरी हरायो ‘हरिश्चन्द्र’ ?
जब डा‍. केसी अनसनरत अस्पताल रणभूमि बन्यो...
गाईलाई सुत्केरी भत्ता....
तातोपानी सीमालाई हेला !
इजरायल जान खेती सिक्दै